ဆိုးလျရှားလိုအပျနတော ဟယျရီကိနျးလို တိုကျစဈမှူး ဖွဈတယျလို့ ဆိုလိုကျတဲ့ ဝိနျးရှနျးနီ – Myan Ball
ယူနိုကျတကျတိုကျစဈမှူးဟောငျး ဝိနျးရှနျးနီက နညျးပွဆိုးလျရှားအနနေဲ့ ဒေါ့မှနျတောငျပံတိုကျစဈကစားသမား ဂြာဒှနျဆနျခြိုထကျ စပါးတိုကျစဈမှူး ဟယျရီကိနျးကို ချေါယူရနျ တိုကျတှနျးပွောဆိုသှားပါတယျ။ စပါးအသငျးနဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျးတို့ဟာ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ ရငျဆိုငျကစားရမှာဖွဈပွီး ဝိနျးရှနျးနီက ဆိုးလျရှားအနနေဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးခေါငျးဆောငျကို ချေါယူသငျ့တယျလို့ ပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဟယျရီကိနျးကို ချေါယူတာက ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ ခကျခဲမှာဖွဈပမေယျ့ ဆနျခြိုထကျ အမြားကွီးအကြိုးရှိစမေယျလို့ ဝိနျးရှနျးနီက ယုံကွညျထားပါတယျ။
စပါး နဲ့ ယူနိုကျတကျပှဲမတိုငျခငျ ရှနျးနီက “ဂြာဒှနျဆနျခြိုက ထိပျတနျးကစားသမားတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာကွောငျ့ အသငျးမှာသူ့နရောမှာ ကစားနတေဲ့ သူရှိနရေကျနဲ့ သူ့အတှကျ ပေါငျသနျး ၁၀၀ နီးပါး အသုံးပွုမှာလဲ? ယူနိုကျတကျမှာ ရပျရျှဖိုဒျ့၊ မာရှယျ တို့ ရှိနပွေီး ဆနျခြိုသာ ရောကျလာရငျ ဂရငျးဝုဒျက နရောပြောကျမှာပါ။
အသကျ အရှယျလညျး အတူတူပါပဲ။ ကြှနျတျောဆိုရငျ ပေါငျသနျး ၁၀၀ ကို ဟယျရီကိနျးကို ချေါယူဖို့ ကွိုးစားသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ကိနျးကို ချေါယူလိုကျမယျဆိုရငျ စပါးအသငျးအတှကျတော့ ခကျခဲသှားမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျက ကစားသမားကောငျးတှကေို အမွဲချေါသငျ့တဲ့အသငျးဖွဈပွီး ကိနျးက ဆိုးလျရှားလိုအပျခကျြနဲ့ ကှကျတိ ကတြဲ့ကစားသမားပါ။ မနှဈက ယူနိုကျတကျ မချေါနိုငျခဲ့တဲ့ ဟာလနျး လို ကြောနံပါတျ (၉) တိုကျစဈမှူး စဈစဈပေါ့” လို့ ပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဆိုးလ်ရှားလိုအပ်နေတာ ဟယ်ရီကိန်းလို တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ၀ိန်းရွန်းနီ
ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ၀ိန်းရွန်းနီက နည်းပြဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ ဒေါ့မွန်တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမား ဂျာဒွန်ဆန်ချိုထက် စပါးတိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်းကို ခေါ်ယူရန် တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ စပါးအသင်းနဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ရင်ဆိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီး ၀ိန်းရွန်းနီက ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းခေါင်းဆောင်ကို ခေါ်ယူသင့်တယ်လို့ ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဟယ်ရီကိန်းကို ခေါ်ယူတာက ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ခက်ခဲမှာဖြစ်ပေမယ့် ဆန်ချိုထက် အများကြီးအကျိုးရှိစေမယ်လို့ ၀ိန်းရွန်းနီက ယုံကြည်ထားပါတယ်။
စပါး နဲ့ ယူနိုက်တက်ပွဲမတိုင်ခင် ရွန်းနီက “ဂျာဒွန်ဆန်ချိုက ထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် အသင်းမှာသူ့နေရာမှာ ကစားနေတဲ့ သူရှိနေရက်နဲ့ သူ့အတွက် ပေါင်သန်း ၁၀၀ နီးပါး အသုံးပြုမှာလဲ? ယူနိုက်တက်မှာ ရပ်ရ်ှဖိုဒ့်၊ မာရှယ် တို့ ရှိနေပြီး ဆန်ချိုသာ ရောက်လာရင် ဂရင်းဝုဒ်က နေရာပျောက်မှာပါ။
အသက် အရွယ်လည်း အတူတူပါပဲ။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ပေါင်သန်း ၁၀၀ ကို ဟယ်ရီကိန်းကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိန်းကို ခေါ်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင် စပါးအသင်းအတွက်တော့ ခက်ခဲသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက်က ကစားသမားကောင်းတွေကို အမြဲခေါ်သင့်တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီး ကိန်းက ဆိုးလ်ရှားလိုအပ်ချက်နဲ့ ကွက်တိ ကျတဲ့ကစားသမားပါ။ မနှစ်က ယူနိုက်တက် မခေါ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဟာလန်း လို ကျောနံပါတ် (၉) တိုက်စစ်မှူး စစ်စစ်ပေါ့” လို့ ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုကျတကျ နဲ့ ကစားမယျ့ပှဲမှာ ပငျနယျတီ ပေးခံရမှာ စိုးရိမျနတေဲ့ စပါးနောကျခံလူ အဲရဈဒိုငျယာ